Caqli-gal: Kharsoodayaasha 'Hackers' Ma rabaan inaad ogaato
Macluumaadka iyo Tiknoolajiyada wuxuu ku yimaadaa waxyaabo kala duwan. Tusaale ahaan,Ganacsiyo badan ayaa hirgelinaya habka e-ganacsiga, mid ah oo ku lug leh samaynta website-yada iyo blogyada si ay u xoojiyaan ololaha suuq-geynta.Waxaa jira qalab badan oo cusub, oo hagaya dadka iyada oo loo marayo hanaanka adag ee abuurista shabakadaha. Qiyaas la mid ah, qalabyadaIsticmaalka koodhka ayaa sidoo kale hormarinaya sidii ay u sii fiicnaan lahaayeen oo u fiicnaan lahaayeen. Khasaaradu waxay ka dhigaan macluumaad badan oo shakhsiyeed iyo sidoo kalemacluumaad kale, taas oo noqon karta mid qiimo leh - фотограф на свадьбу москва цены.
Waxay shabakadda internetka ka rogi karaan macluumaadka sida kaararka deyntamacluumaad iyo sidoo kale macluumaad kale oo faa'iido leh. Natiijadu, dadku waa inay ka taxadaraan weerarradan kuwaas oo ay weheliyaan waxyaabo kale oo badan oo suurtagal ahkhaniisku wuu qaban karaa. Dad badan ayaa isweydiiya sida jaangooyuhu u fuliyaan falalkooda iyagoo leh heer aad u sarreeya. Wixii mid ka mid ah si aad uga fogaato hackersoo ka badbaadi isku daygeeda hack, waxaa loo baahan yahay in la fahmo sida ay hackers hack websites.
Qaar ka mid ah hirgelintooda iyo hababkoodu waxay ku jiraan buugan, diyaarisayFrank Abagnale, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Dijital ah.
Weerarkan waxaa ka mid ah weeraro websiyooyin liidata si loo akhriyoDiiwaangelintooda. Kumbuyuutarkani wuxuu xaday macluumaadka shakhsiyeed sida kaararka deynta, isticmaalaha, iyo passwords. Dhiirigelinta Sigaarka waxay dhacdaa iyadoo la isticmaalayo qaas ahqalabka, kaas oo akhrin kara nooca xogta macluumaadka oo ku dhejinaya macluumaadka macaamiisha ee khuseeya. Habkani wuxuu awood u siin karaa in macluumaadka akhbaarta ah ee hacker-ka, la geliyoama feylow faylasha xogta diiwaanka iyada oo la adeegsanayo fariimo fog
Iskuday Seddex Goob..
Weerarkan waxaa ka mid ah isticmaalka qoraalka faahfaahinta qoraalkaee bogga. Weerarkan waxaa ka mid ah samaynta dhibbanaha guji faafin faafin ama faylka. Sidaa darteed, qoraalku wuxuu heystaa shabakadda. Kacaankawaxay heleen fursad ay ku helaan sida dukaanka, iyo sidoo kale ereyada sirta ah ee boggaga internetka. Waxaad ka hortagi kartaa weerarkan iyada oo loo marayo macluumaadka sidoo kalesida soo bandhigida nidaam farsamo oo labaad oo macaamiishu u socoto.
Kaluumeysiga iyo cabsida.
Kuwani waa bogagga shabakada, kaas oo khidmayn kara isticmaalahaxogta ku-soo-baxa ee bogga been abuurka ah. Macluumaadka qofka isticmaala wuxuu noqon karaa mid muhiimad weyn u leh amniga nidaamka xogta. Wixii weerar ah,qofka isticmaala wuxuu helaa macluumaad qiimo leh sida sirta iyo sidoo kale inuu galo websaydh. Kiisaska qaarkood ee weerarradani waxay keenayaan in la yareeyo abogga mashiinka raadinta raadinta khasaaro weyn u leh shirkadda.
weeraro dhexdhexaad ah oo u dhexeeya Man.
Internetku wuxuu ku saabsan yahay is-weydaarsiga macluumaadka. Bogga internetka, aisticmaaluhu wuxuu soo diraa oo wuxuu ka helaa xogta server ama database. Maadaama ay xogtu socoto, waxaa jira nuglaansho, taas oo dhacda heer kasta oo ka mid ahgeedi socodka. Ninka dhexe wuxuu weeraro bartilmaameedyada ku xadidaya macluumaadkan, taasoo keeni karta in lumiyo khasaaraha warshadaha shirkadda.
Khasaaradu waxay malaayiin lacag ah ka qaadaan khiyaano iyo siyaabo kale. Waxay keenaan dad badankhasaarooyinka iman kara iyo sidoo kale keenaya dhibaato iyo dhib ku ah dhibbanayaashooda. Noocyo badan oo ka mid ah weerarrada hack waxay ku guulaysteen sababo badan oo nugul ahwaxay ku jiraan nidaamyada caadiga ah. Waxaa loo baahan yahay in la helo aqoon ku filan oo ku saabsan weerarradan. Badbaadada bogaggaaga iyo tan adigaMacaamiisha waxay ku xiran tahay waxtarnimada tallaabooyinka noocaas ah. Waxaad baran kartaa sida casiliyayaashu ay ugu guuleystaan ​​in ay dhexgalaan iyadoo la isticmaalayo tilmaan-bixiyahan.